Pfungwa dzevanhu ndomunhu, chido ndidhiyabhorosi.
Chido chekuita zvepabonde uye chido chemasimba chinoita hero.
Gehena ine simba munyika yepanyama, libra, zvepabonde, uye munyika yepfungwa, virgo-scorpio, fomu-chido.
Vol. 12 NOVEMBER, 1910. Nha. 2
HAPANA shoko rakarwisa uye rakawedzera, rakatsamwa uye rinotyisa, rinotambudza uye rinorwadzisa pfungwa yevanhu kupfuura pfungwa uye shoko rehero. Vanenge vese vanoziva nayo, vazhinji havagoni kutaura kunze kweiyo, vamwe vana mairi, asi, kunze kwechechi uye vanoreurura, vashomanana vanofunga kwenguva yakareba pamusoro pazvo vasina kufungira kuziva kuti chii, chii ichocho, uye kana chiri , nei iri.
Mhedziso yegehena inogadziriswa nehurongwa hwose hwechitendero uye inoratidzwa neshoko rakapiwa kuvanhu nevanodzidza zvechitendero chechitendero ichocho. Kunyange madzinza emusango anofarira pfungwa yegehena; kunyange zvazvo vasina chitendero chavanotarisira vanotarisira pane imwe nzvimbo kana mamiriro ezvinhu anoratidzwa mupfungwa dzavo neshoko rinomirira gehena.
Pfungwa yegehena inouya kwatiri kunyanya kubva muchiHebheru, chiGiriki nechiLatini; kubva pamashoko akadaro se gehenna, sheol, tartaros, hades. Vafundisi vezvechiKristu vakadzokera kumashoko ekare uye vakadzokorora, vakawedzera, vakavezwa, vakafuridzirwa, izvo zvinorehwa kare kuti zvive zvifananidzo zvinotyisa uye nzvimbo dzakarongedzwa sezvinoratidzirwa nezvinodiwa zvechitendero uye vavariro dzaivakonzera. Saka gehena yakatsanangurwa senzvimbo iyo uyo anopinda anogadzirirwa kutambura, kutambudzwa, uye kutambudzwa kwezviyero zvakasiyana zvehurefu uye nguva.
Gehena inonzi inobva kune imwe nyika ino. Zvinonzi iri pakati penyika; uye zvakare, muzvikamu zvepasi zvepasi, uye, kuti zvive pasi pedu. Inotaurwa nemashoko akadai sehova, guva, gomba kana gomba rekuparadzwa, gomba risina chigadziko, nyika yemumvuri, nzvimbo isina kuonekwa kana nzvimbo, nzvimbo yevakaipa. Zvinonzi ihombe, chivako, chikafu, jeri, nzvimbo inoremedza zvinorwadza, nzvimbo yakafukidzwa kana yakavanzwa, nzvimbo yekutambudzwa, rwizi kana dziva remoto, nzvimbo yemweya yakasvibiswa. Inonziwo yakadzika, rima, zvose zvinoparadza, zvisingagoneki, zvisingakanganisi, uye zvekutambudzwa kusingaperi. Inorondedzerwa senzvimbo iyo moto nesarufa zvinopisa zvisingaregi uye apo honye gnaws uye haina kumbogutsikana.
Idzidziso yegehena yakave yakashandiswa kufadza pamusoro pemafungiro evanhu zvakakurumidza kuti vawane chitendero uye vobva vapukunyuka kugehena. Asi kwete kuzvigutsikana nekupa mienzaniso inoshamisa kuvanhu vakuru, vadzidzisi vezvechitendero vakashanda nesimba mukutsanangurira vana vaduku mamwe emasangano egehena. Mukunyora pamusoro pezvimwe zvehedheni dzeBrahmanism, Monier Williams anovafananidza nehana yechiKristu gehena uye anotsanangura bhuku reRoma Katurike kuvana vakanyorwa naRev. J. Furniss. Mufundisi baba, mukurondedzera kwake, akawana kusvika kumudziyo wechina goroti rinobikira. "Teerera," anodaro iye, "kune inzwi rakafanana nere kettle iri kuvira. Ropa riri kuvira muhupwa hwakatsvuka hwomukomana uyo; uropi huri kuvira uye huchivhuvhuta mumusoro wake; marora ari kuvira mumafupa ake. "Anoenderera mberi achiti," Chechi yechishanu gomba ndiro furuni inopisa inenge iri mwana muduku. Inzwa kuti rinodanidzira sei kuti ribude; ona kuti rinoshanduka sei uye rinopesana pachayo mumoto; inorova musoro wayo pamusoro pedenga revheni. "Bhuku iri rakanyorerwa kuitira vana kuburikidza nababa vechechi yeRoma Katurike.
Monier Williams anotaura kune mumwe munyori anopa zvakakwana zvakakwana uye maonero akazara ekuguma kwepasi uye nekuguma kwevakaipa. Anonyora kuti, "Nyika ichave yakashandurwa ikava dziva guru kana mvura inopisa moto, umo vakaipa vachakoromorwa, izvo zvicharamba zviri mumhepo ine simba, mavari vachabvongodzwa, vasina zororo zuva kana husiku . . . misoro yavo, maziso avo, marimi avo, maoko avo, tsoka dzavo, chiuno zvavo uye mavheti avo achazara nokusingaperi achitsva, moto unoputika, unotyisa zvokuti unogona kunyungudutsa matombo nematombo. "
Kudzokera kune dzimwe nyanzvi, Monier Williams anotsanangura kubva mharidzo yemuparidzi akapembererwa, uyo anoudza vateereri vake zvavanogona kutarisira sezvakaitika-kunze kwekuti vachipinda muchitendero icho seareka yavo chete yekuchengeteka. "Kana ukafa, mweya wako ucharwadziwa woga; iyo ichange iri gehena nokuda kwayo; asi paZuva rekutongwa muviri wako uchabatana nemweya wako uye iwe une mapatya maviri; muviri wako unotuka madonhwe eropa, uye mweya wako unotambudzwa nekutambudzika. Mumoto unotyisa, chaizvoizvo sezvatinazvo panyika, muviri wako uchava, se-asbestos-yakafanana, nokusingaperi asingatauri; miviri yako yose migwagwa yemakumbo okurwadziwa kufamba; mhando dzose dzetambo iyo dhiyabhorosi acharamba achitamba nheyo yake yebhaibheri yekushungurudzika kusingachinji. "
Iyi inotsanangurwa yakajeka uye inoshandisa inofananidzwa nemazuva ano emazuva ano. Asi sezvo pfungwa dzichiwedzera kuvhenekerwa pfungwa dzakanaka dzakadaro dzinoderedza ure, uye saka marudzi akadaro ehero anobuda mumafashoni. Ichokwadi, nehuwandu hunoramba huchiwedzera hwezvitendero zvitsva, rutendo rwemafashoni zvino rwunova: hakuna hero. Saka pendulum inoshanduka kubva kune imwe yakanyanya kune imwe.
Maererano nemhando dzepfungwa dzinouya mumitumbi yenyama, zvitendero zvevanhu, zvinopesana kana nezvehero zvakashanduka uye zvichachinja nguva nenguva. Asi pane izvo zvakapa uye zvichiri kukonzera maonero nekutenda pamusoro pegehena. Hero haingave iyo iyo yakave yakavezwa. Asi kana pasina hero ikozvino hakuna kumbova negehena, uye pfungwa dzose dzakapesana nehurukuro dzakagadzikana nechimwe chinhu chisina kuvapo, uye mamiriyoni asingaverengeki ekare akagara uye akafunga nezvehero vakatarisa mberi uye vachinetseka pachavo pamusoro pechinhu chisina kana chakanga chisati chavapo.
Dzidziso inobatanidzwa pamwe chete nezvitendero zvose ine chimwe chinhu chiri mukati maro icho chiri chechokwadi, uye icho icho munhu anofanira kudzidza. Apo zviyero uye fresco basa zvakasarudzwa, mumwe anoona zvakakosha zvekudzidzisa kuti ichokwadi.
Izvo zviviri zvinokosha zvekudzidzisa ndezvokutanga, kutambura; sechigumisiro che, chechipiri, chiito chisina kunaka. Pane chimwe chinhu mumunhu chinonzi hana. Hana inotsanangurira munhu apo haufaniri kuita zvakaipa. Kana munhu asingateereri hana, anotadza. Paanoita zvakaipa anotambudzika. Kutambura kwake kunokonzerwa nechakaipa chakaitwa; iyo ichakurumidza kana kushorwa sezvinotsanangurwa nezvikonzero zvinotungamirira kushanda. Ruzivo rwomunhu rwemhando yezvakanaka kubva pane zvakaipa, pamwechete nekutambura kwaakaona, ihwo huviri hwekudavira kwegehena. Izvi zvinomuita kuti agamuchire dzidziso yegehena yemudzidzi wezvechitendero, yakarongwa, yakagadzirwa uye yakagadzirwa nemidziyo, zvishandiso uye mafuta, zvakakosha kune basa riri muruoko.
Kubva pakurongwa kwechitendero chakaoma kusvika kune rutendo rushoma rworudzi rusina kunzwisiswa, zvirongwa zvega roga uye rinogadzira gehena senzvimbo uye nezvinhu zvakakonzera kukonzera kushungurudzika nekurwadziwa kune vagari vegehena. Munyika dzinotonhora nyika chitendero chekuzvarwa chinopa moto unopisa. Vanhu vanogara mukutonhora kwepurasitiki vane hove inotonhora. Munzvimbo yakanyanyisa vanhu vane moto uye inotonhora hero. Zvimwe zvitendero zvinosiyana nhamba. Zvimwe zvezvitendero zvinopa makumi maviri nemasere kana makumi mana emakore ekuparadzanisa nemasangano uye madhipatimendi kuitira kuti ave nenzvimbo dzakagadzirirwa kune zvinodiwa nevose.
Zvitendero zvekare zvakapa gehena kune avo vekutenda kwavo. Chimwe chemasangano akawanda echitendero chechiKristu chinopa gehena, kwete yevaya vari vesangano rayo uye vanotenda mune dzidziso dzaro, asi kune mamwe masangano echiKristu, vanhu vemamwe machechi, uye avo vanotenda musina chitendero. Kubva kuhero kune imwe nyika ine unyoro uye yakaperera kune avo vekushungurudzika kwakanyanya uye kunogara kwenguva refu, hero yezviro zvemarudzi ose uye madigiri anotendwa.
Chinhu chikuru chechitendero chehero ndechedhiyabhorosi waro. Chitendero chimwe nechimwe chine dhiyabhorosi uye dhiyabhorosi rimwe nerimwe rinosiyana nenzira uye basa rinoitwa kune mamwe madhimoni. Dhiyabhorosi anoshandisa zvinangwa zviviri. Anoedza uye anonyengedza munhu kuti aite zvisina kunaka, uye ane chokwadi kuti anobata murume anoita. Dhiyabhorosi anobvumirwa rusununguko rwaanoshuva mukuedza kwake kuedza munhu, uye kana akabudirira mukuedza kwake anowana murume semubairo wake.
Icho chiri shure kwekutenda muna dhiyabhorosi ndiko kuvapo kwevanhu vane chido uye simba rayo uye simba pamusoro pemafungiro ake. Chido mumunhu ndiye muedzo wake. Kana munhu achizvipira kune kukurudzira kwechido chisina mvumo-asingabvumirwi nemutemo sekugadziriswa nehana yake nemitemo yake yezvetsika-akasungirirwa nechido ichocho sekuchengeteka sezvinonzi dhiyabhorosi anonzi anotora vanhu vake muuranda. Semhando dzakawanda dzemarwadzo nemanzwiro anoshumira pachishuvo chisina kukodzera, madhimoni akawanda uye gehena uye nzira dzekutambura dziripo.
Mafungiro evana nevakakosha uye vanotya ave akarwiswa uye asina kushandiswa munzvimbo dzavo muupenyu kuburikidza nedzidziso dze diablical dzebhaibheri yegehena. Mwari ave achinyombwa uye dhiyabhorosi akachera vamwe nevanokanganisa, vanoreve kana vanotsanangura zvinyengeri zve dzidziso.
Zvakaipa kutyisa vana nevana uye kutya vanhu nekutya dzidziso pamusoro pegehena. Asi zvakanaka kuti munhu wose azive nezvegehena, kupi, chii, uye nei chiri, uye kuti chii munhu ane chokuita nazvo. Pane zvakawanda zviri zvechokwadi mune zvinyorwa zvinowanzoitika pamusoro pezvidzidzo zvegehena, asi dzidziso uye kusiyanisa kwavo zvakanyatsotsanangurwa, kubhadharwa, kushandiswa, kushandiswa, kuti pfungwa inopesana, inoseka, inoramba kutenda kana kusazvidza dzidziso.
Hero haisi chirango chisingaperi, kwete kumuviri kana kumweya. Hero haisi nzvimbo umo mushure mekunge kana mushure me "zuva rekutongwa" vanhu vakafa vachamutswa uye vachakandirwa kwavanopisa nokusingaperi nekusingaperi vasina kumbopedza. Hero haisi nzvimbo, apo vana kana mweya yemucheche uye yevasina kubhabhatidzwa vanoenda uye vanogamuchira kutambudzika mushure mekufa. Uye haisi nzvimbo iyo pfungwa kana mweya dzinogamuchira kurangwa kwemhando chero ipi zvayo nokuti havana kupinda muchifuva cheimwe chechi kana kubvuma chitendero chakati kana zvimwe zvikamu zvekutenda. Hero haisi nzvimbo kana gomba, kana gomba, kana jeri, kana gungwa rekupisa sarufa umo miviri yevanhu kana mweya inoraswa shure kwekufa. Hero haisi nzvimbo yekusununguka kana kurasikirwa nemwari ane hasha kana ane rudo, uye iyo yaanoshora avo vasingateereri mirairo yake. Hapana chechi ine unhu wegehena. Hero haisi yekubatsira chero kereke kana chitendero.
Jahena rine simba munyika mbiri; iyo nyika chaiyo uye nyika ye astral kana yepfungwa. Zvikamu zvakasiyana zveedzidziso dzegehena zvinoshandisa kune imwe kana mbiri mbiri dzenyika. Gehena inogona kupinda uye inoziva munguva yepanyama uye ruzivo runogona kuwedzerwa munyika ye astral kana yepfungwa munguva yehupenyu hupenyu kana shure kwekufa. Asi izvi hazvidi uye hazvifaniri kukonzera kutyisa kana kutya. Icho sechisikigo uye sechinyatsopindirana sehupenyu uye kukura munyika yepanyama. Kutonga kwegehena munyika yepanyama kunogona kunzwisiswa nemafungiro chero ose asina kukwana warped kanawo kusvibiswa kunodziviswa kubva pakunzwisisa. Kutonga kwegehena mune nyika yepfungwa kana yepasi kunogona kunzwisiswa neiye asingatsigiri kuti hakuna nyika yepasi kana yepfungwa uye uyo asingatendi kuti rufu runoguma zvose uye kuti hakuna hupenyu huchauya mushure mekufa.
Kune munhu mumwe nomumwe pane imwe nguva ichave yakaratidza kuvapo kwechimwe chinhu chinoratidzwa neshoko hero. Upenyu muhupenyu hwenyama huchazviratidza kuvanhu vose. Apo munhu anopinda munyika yepfungwa, ruzivo rwake ikoko runopa humwe uchapupu. Hazvina kudiwa, zvakadaro, kuti munhu akamirire kusvika mushure mekufa kuti awane an astral kana chepfungwa yegehena. Chiitiko ichocho chinogona kunge chave chiripo paairarama mumuviri wake wenyama. Kunyange zvazvo nyika yepfungwa ingangodaro iine ruzivo mushure mekufa haikwanise kuvapo neuchenjeri kutarisana nayo. Iyo inogona kuzivikanwa uye inonzwisisika inobata nayo apo munhu ari kurarama mumuviri wenyama uye asati afa.
Hero haisi kumira kana kusingaperi. Inoshandiswa muhutano uye huwandu. Munhu anogona kubata pamiganhu yegehena kana kuongorora zvakavanzika zvepakadzika. Acharamba asina zivo kana kudzidza kubva pane zvaakaona maererano neutera kana kuti kukanganisa uye kukwanisa kwepfungwa dzake uye maererano nekuda kwake kumira miedzo uye kubvuma chokwadi maererano nezvakawanikwa.
Ikoko kunoratidzika kunge kune marudzi maviri egehena munyika yepanyama. Pano pane gehena yomunhu wega, iyo ine nzvimbo yayo mumuviri wake wenyama. Apo hero inomuviri wemunhu inoshingaira inoita marwadzo ayo vanhu vakawanda vanoziva. Zvadaro pane hurumende kana gehena gehena, uye umo munhu mumwe nomumwe ane chikamu chimwe. Gehena haisi ikozvino yakawanikwa, uye kana iri, inonzwisisika yakajeka uye somunhu oga. Hapana nheyo dzakakosha dzinoonekwa.
Sezvo munhu achienderera mberi kuongorora iye achaona kuti "dhiabhorosi nengirozi dzake" inogona kutora-kunyange isiri yomuviri. Dhiabhorosi wegehena wega wega wekugadzirisa uye kutonga chido. Ngirozi dzadhiyabhorosi, kana madhimoni maduku, zvido zviduku, zvido, maitiro nekuchiva zvinoteerera uye kushumira chido chavo chikuru, dhiyabhorosi. Chido chikuru chinosimbiswa uye chichigadzwa nehondo yake yemadhimoni, zvido, uye anopiwa simba uye anobvumidzwa kutonga nepfungwa. Apo paanopiwa kana kubvumira simba dhiabhorosi hazvizivikanwi uye hero inoramba isingazikamwi asi nyika inoshanda. Apo munhu anoteerera, achitaura kana kuita zvibvumirano pamwe kana kuzvipira kune zvido zvake nekuchiva, dhiabhorosi negehena hazvizivikanwi.
Kunyange zvazvo munhu achiyambuka miganhu yaro uye anotarisana mamwe marwadzo anowanikwa kunze kwemasimba, izvi hazvizivikanwi pamatambudziko avo echokwadi uye zvinotaridzirwa sematambudziko ehupenyu. Saka upenyu mushure mehupenyu munhu anouya munyika yepanyama uye anotsvaga miganhu yegehena, uye anonakidzwa nezvimwe zvifaro zvishoma uye anovapa iwo mutengo kana chirango chehero. Kunyangwe iye angapinda zvakanaka munharaunda yaasingaoni uye haazvizivi kuti igehena. Saka gehena haigone kuonekwa uye isingazivikanwi nevarume. Kutambudzika kwegehena kunotevera zvisiri izvo, zvisiri pamutemo uye zvinoparadza zvido zvekuda uye zvishuvo, zvakadai sehupenzi husina kunaka, kushandiswa kwakanyanya kwezvinodhaka uye doro, uye kusiyanisa uye kushandiswa kwebonde basa. Pamasuwo ose egehena kune chikonzero chokupinda. Iyo inokurudzirwa ndeyokunzwa kwomufaro.
Chero bedzi munhu achitevera maitiro echisikiro uye zvido zvake haazozivi zvakawanda pamusoro pegehena, asi achararama hupenyu hwechisikigo pamwe chete nemushandi wake hunofadza zvisikwa uye pamwe nekubata kamwechete kwegehena. Asi pfungwa haigoni kugutsikana kusiya chero chikamu kana humwe hwepasi husina kushandiswa. Nokudaro mukusaziva kwaro pfungwa pane imwe nguva inopesana nemutemo, uye kana iyo yakafa inopinda. Pfungwa inotsvaka kufara uye inoiwana. Sezvo pfungwa dzichiri kunakidzwa, iyo inofanirwa kuita kuburikidza nhengo dzenjere, dzinosvibiswa; ivo vanorasikirwa nekutambira kwavo uye vanoda kukurudzira kukuru; saka pfungwa inokurudzirwa kuti vaite zvinonakidza zvakanyanya. Mukutsvaga kufara, uye kuedza kuwedzera mufaro, zvinopesana nemitemo uye pakupedzisira inogamuchira chirango chakarurama chekutambura uye kurwadziwa. Yakangopinda mugehena. Pfungwa inogona kubva mugehena mushure mekuripa mubairo wekutambura kunokonzerwa nebasa risingabvumirwi nemutemo rakakonzera. Asi vasingazivi pfungwa havadi kuita izvi uye vanoedza kupukunyuka chirango. Kuti urege kunetseka, pfungwa inotsvaka sechirwere chinowedzera kufara uye inobatwa muzvitsva zvegehena. Saka pfungwa kubva muupenyu kuhupenyu inounganidza, inobatanidza nehubatanidza, neketani yematokari. Izvi zvakagadzirwa nemafungiro nemabasa. Ichi ndicho chine chaanosungwa nacho uye chaanobatwa nechido chake chekutonga, dhiyabhorosi. Vose varume vanofunga vakaenda mune imwe nzvimbo yegehena uye vamwe vakapinda mune zvakavanzika zvaro. Asi vashomanana vakadzidza kuti kana sei vanogona kutora maonero, saka havazivi kuti vari kure zvakadini, uye havazivi kuti chii chavanofanira kutora kuti vaende.
Anofunga kana kwete iye anozviziva, munhu wose anofungidzira anorarama munyika yepanyika ari mugehena. Asi gehena haizove yakanyatsowanikwa uye dhiyabhorosi haazozivikanwi naye nenzira dzakajairika uye dzakasununguka zvepanyama. Kuwana gehena uye kuziva dhiyabhorosi munhu anofanira kuramba achizviita nekuchenjera, uye anofanira kunge akagadzirira kutora mhinduro. Migumisiro iri pakutanga pakutanga kutambura, izvo zvinowedzera kuwedzera. Asi pakupedzisira pane rusununguko. Chimwe chinhu hachifaniri kutaurira ani zvake kuti achawana hero nekuziva dhiyabhorosi. Anokwanisa uye anofanira kuita zvose ari kurarama munyika.
Kuwana gehena uye kusangana naDhiyabhorosi kune imwe chete inofanira kukurira uye kukunda uye kudzora chido chake chekutonga. Asi munhu haawanzoiti saizvozvo kupikisa kwakasimba uye kutonga chido chechimiro chake. Ichi chido chikuru chinomira kumashure, asi ndiye mukuru wevatumwa vake vose, madhimoni maduku, zvido zviduku. Saka munhu, paanopikisa dhiyabhorosi, anongosangana chete nevakuru vake kana pasi pevamwe. Asi kunyange kukakavhiringidza chimwe cheizvi chakakwana kupa anokwikwidza hondo huru.
Ihwo hupenyu humwe humwe hunogona kutorwa mukukunda nekudzora chimwe chezvido zviduku. Nokurwisana nekukunda chimwe chido chekuda, kana nekuramba kutungamirirwa nekushanda kwekuwana chimwe chido chakashata icho, munhu anokunda umwe wevatumwa vadhiabhorosi. Kunyange zvakadaro haasangana neDhiyabhorosi guru. Chido chikuru, tenzi wake-dhiyabhorosi, anoramba ari kure, asi anoratidzwa kwaari mune zvikamu zviviri: zvepabonde nesimba; vanomupa gehena-mushure mekufadza. Izvozvi zviviri, zvepabonde uye simba, zvinobva kune zvakavanzika zvezvisikwa. Nokukunda nekudzidzora nekunzwisisa mumwe anogadzirisa dambudziko rekuvapo uye anowana chikamu chake mairi.
Kuedza kwakatsunga kukunda tenzi chido chinhu chakaoma uye kuiswa kwadhiyabhorosi. Chinangwa chepabonde kubatana. Mukuziva kuti kubatana kunofanira kusakundwa nechido chepabonde. Chakavanzika uye chinangwa chemasimba ndiko kuwana kune njere dzinobatsira vose. Kuti ave akangwara nenzira iyi munhu anofanira kukunda nekudzivirira kushuva kwesimba. Mumwe anotungamirirwa nechishuvo chepabonde kana uyo anoda chiremera haagoni kuziva kubatana chii kana kuti huchenjeri hunobatsira chii. Kubva pane zvakaitika kwavari kuburikidza nehupenyu hwehupenyu pfungwa inotsvaka kukura, kana kuburikidza kuburikidza nehutano hwepamusoro kana nemafungiro ehuMwari kana nezvose. Sezvo pfungwa dziri kuramba dzichifambira mberi mukukura kwayo inosangana nematambudziko mazhinji uye inofanira kuisa kana kutora zvakawanda zvekutsva kwemazwi uye dzakawanda zvekunakidza kwepfungwa. Kuenderera mberi kukura uye kubudirira kwepfungwa kunokonzera kuti iite mukurwisana kukuru nadhiyabhorosi, kurwisana nehupombwe, uye shure kweizvozvo, kuzviisa kwekupedzisira kwedhiyabhorosi nekukunda kwechido chemasimba.
Vhangeri nevanyanzvi vakaratidza uye vakarondedzera pfungwa dzakabatanidzwa mukurwisana, nezviratidzo zvakadaro kana zvinotsanangurwa seyaLaocoon, basa raHercules, nhema ye Prometheus, nhoroondo yehutu hwegoridhe, nhau yeOdysseus, nhoroondo yeHelen weTroy.
Vakawanda vanofungidzira vakapinda mugehena, asi vashomanana vakunda uye vakaisa dhiyabhori pasi. Vashomanana vanoda kana vanokwanisa kuramba vachirwisana mushure mokunge vatanga-kutanga uye saizvozvo, mushure mekunge vakuvadzwa uye vashaiwa nehuwandu hwedhiyabhorosi hwechido chekuita zvepabonde uye chido chemasimba, vakapa, vakasiya hondo, vakarohwa , uye vakaramba vachizviisa pasi pezvavanoda. Munguva yekutambudzika, vakatambura nehuwandu hwenheyo sezvavakanga vachida kumira. Mushure mokunge vapinda, vakawanda vakafunga kuti vakakunda nekuda kwevamwe mushure mekurwa uye nekuda kwekumwe kubudirira kunotevera semubairo wekuzviisa pasi mushure mekurwa. Vamwe vakazvipa mhosva sevanorota vasina mano uye mapenzi nokuda kwekuita basa risina musoro kana risingaiti. Hakuna zviratidzo zvekunze kana munhu akarwisa uye akakunda dhiabhorosi uye akapfuura negehena. Anozviziva, uye zvose zvese zvine chokuita nazvo.
Mutsa wakaipisisa kana kuti wegehena, uri kutambura kana kutambudzwa kuburikidza nemuviri wenyama. Apo muviri wenyama uri hutano uye hunyararo hapana pfungwa kana mazano kubva kune gehena. Iyi yehutano uye nzvimbo inonyaradza inosara apo mabasa omutumbi akavhiringidzika, kukuvadzwa mumuviri kunokonzerwa, kana kana zvishuwo zvemuviri zvemuviri zvisati zvigutsikana. Rudzi rwemhando yegehena chaiyo inokwanisika kuti munhu ave nekunzwa inonzwa paanenge ari kurarama munyika ino. Munhu anotarisana negehena chaiye semugumisiro wenzara uye kurwadziwa. Apo chikafu chinodiwa nemuviri nzara inotanga, uye nzara inowedzera zvikuru sezvo muviri wakarambwa kudya. Mumuviri wakasimba uye wakagadzikana unowanzoshungurudzwa nenzara pane imwe yakatotanga uye yakasakara. Sezvokudya zvinorambwa muviri uye muviri unodanidzira kuti uwane zvokudya, pfungwa inofadzwa uye inowedzera nzara nekufunga nezvekudya iyo isina. Apo pfungwa inoenderera mberi kufunga kuti kutambura kwomuviri kunowedzera, uye zuva nezuva zuva muviri unowedzera kupenga, uye sango. Nzara inova nenzara. Muviri unova kunotonhora kana kufara, rurimi rwakaoma kusvikira muviri wava skeleton uye nguva yose iyo pfungwa inoita kuti kutambura kwemuviri kunzwe zvakanyanya nekufunga nezvekuda kwemuviri. Imwe inobereka kutambura nokutsanya nokuzvidira hazvioni zvakadaro kunegehena kunze kwechikamu chayo chine unyoro, nokuti kutsanya kunofadza uye kune chimwe chinangwa uye chinangwa nemafungiro. Mukuzvidira nokutsanya pfungwa haisimbisi nzara nekupa nzira yekuchiva kwekudya. Inorambidza pfungwa uye inokurudzira muviri kuti uite kwenguva yakatarwa, uye kazhinji pfungwa inoudza muviri kuti ichava nezvokudya kana kutsanya kwapera. Izvi zvakasiyana zvakasiyana negehena yakatsungirira kubva pakushaya nzara.
Munhu ane hutano haatangi kunzwisisa kuti gehena yekutambudzika kwepanyama ndeyei kusvikira aine ruzivo rwakadai sekumhanya kwezino. Kana iye ane ziso rakasununguka kunze, mhundo yake yakapwanyika, kufema kwakaita kuti zviome; kana akawira muchitsiko chechidimbu chechidimbu kana kuti anorasikirwa nemvere, kana kuti ane chirwere chekudya mumutsipa, maitiro ose ekutambudzika anokonzerwa nezvo zvinonzi zviitiko uye izvo mapepanhau azere, chero chiitiko chakadaro chichaisa mugehena . Kuwedzerwa kwegehena rake kuchava maererano nemafungiro ake uye kukwanisa kwake kutambura, pamwe nekuwedzera kwekutambura kwemuviri nefungwa inotyisa uye inonyangadza, sezvakaitika kune vakaurayiwa neSpanish tsvakurudzo. Avo vanomuona havazozivi gehena yavo, kunyange vachigona kunzwira tsitsi uye kumuitira zvavanogona. Kuti aone kuti gehena yake inofanira kunge yakakwanisa kuzviisa munzvimbo yechirwere ichi pasina kukundwa nemarwadzo. Mushure mokunge wapfuura uyo akatambura akadai gehena angakanganwa, kana kuti ave nechirangaridzo chokurota chazvo chete.
Hapana chinhu chakadai kana hupenyu mushure mekufa semudzidzi wezvebhaibheri, kunze kwekuti muumbi wekugadzirisa-ari kukwanisa kutakura naye mifananidzo yaakagadzira munguva yehupenyu hwake hwepanyama. Izvi hazvibviri kuitika; asi kunyange kana akakwanisa, vamwe kupfuura iye aisazovawana. Mifananidzo yehero inowanikwa chete kune uyo akavepa.
Rufu rwakafanana nekuzvarwa sekuzvarwa. Iyo inoti mushure mekufa ndeyezvisikwa uye zvakaenzana sezvikamu zvinotevera zvekukura mumuviri wenyama. Kusiyana ndekwokuti, kubvira paucheche kusvika kumurume akazara, pane kuunganidza, kuuya pamwe chete, kwezvikamu zvose zvevanhu zvinogadzirwa; asi, kana kana mushure mekufa pane kuregererwa kupfurikidza nepfungwa yezvose zvakakosha uye zvikamu zvekunzwisisa, uye kudzokera kune imwe nyika yakarurama isina mhosva.
Pfungwa iyo inonyanya kunyanya kufungidzira zvenyama uye inotora mufaro wayo mukuru kune iyo ichave ine yakaoma hero. Hhero yaro iri mune kupatsanurwa kwepfungwa kubva kuchido uye kunzwa, mune mushure mekufa rufu. Gehena inoguma apo pfungwa dzinozviparadzanisa kubva kune zvido zvenyama zvinonamatira pamusoro payo. Pakufa kune dzimwe nguva, asi kwete nguva dzose, kuramba kwehuzivi semunhu mumwechete wehupfungwa sezvinoitika muupenyu hwehupenyu. Vamwe pfungwa dzinovata kwekanguva mushure mekufa. Pfungwa dzehupenyu dzinobata pfungwa yokuti dzakagadzirwa uye dzinovimba nedzimwe pfungwa dzine moto unotyisa. Iyo mushure mekufa hero inotanga pakarepo pfungwa iyo isina rusununguko kubva mumuviri wenyama uye inoedza kupa pachena kuronga kwakasimba kwehupenyu hwavo hwekare. Kuda kwekutonga kwehupenyu, kusimbiswa nezvido zviduku zvese, zvinoreva kufunga kwepfungwa uye kunoedza kumanikidza pfungwa kubvuma uye kubvuma kutendeseka. Asi pfungwa haigoni, nokuti inobva kune imwe nyika uye inotsvaka rusununguko kubva kune zvishuwo zvakadai sezvisingabatanidzi zvimwe zvakanaka zvakachengetwa munguva yehupenyu asi izvo zvaisakwanisa kupa zvakazara. Hero inongotora nguva inoda kuti pfungwa izvisununguke pachayo kubva kune zvido zvinodzivirira iyo, pfungwa, kubva kutsvaga nzvimbo yayo pachayo. Nguva yacho ingangodaro asi yenguva pfupi kana inogona kunge yakareba kwenguva refu. Nguva, mubvunzo wenguva yegehena, ndiyo iyo yakakonzera kugehena kusingagumi kana kusingaperi kwemudzidzi wezvechitendero. Nyanzvi yezvechitendero inofungidzira nguva yegehena kuti isingaperi-sekuwedzera kusingaperi kwemafungiro ake epanguva muzvisikwa zvenyika. Nguva yepanyama, kana nguva yezvisikwa zvenyama, haipo mune imwe yei mushure mekufa. Hurumende imwe neimwe ine nguva yake chaiyo. Maererano nekukura kwekunzwa kwekusingaperi kana nguva yenguva refu inogona kuonekwa seyo inotorwa mune imwe nguva, kana imwe nguva inogona kuwedzerwa kusvika nekusingaperi. Kune pfungwa dzakakwana dzechiito chinokurumidza, hupenyu husingaperi hwegehena inogona kuva chiitiko chekanguva. Mwoyo wakaipa uye upenzi ungada nguva yakareba yegehena. Nguva yakavanzika chikuru kupfuura gehena.
Pfungwa imwe neimwe ndeyekutakura kwenguva yakareba kana yakafa hero shure kwekufa pamwe nehupenyu. Munguva iyo mushure mekufa uye asati asvika kupfuura gehena, pfungwa inofanira kusangana uye kukunda dhiyabhorosi. Maererano nehutano hwepfungwa uye kunyatsofungisisa, dhiyabhorosi achatora maitiro uye anonzwisiswa mupfungwa. Asi dhiyabhorosi haagoni kutora mafomu kana pfungwa isingakwanisi kumupa fomu. Dhiyabhorosi haaoneke zvakafanana mufananidzo kune vese pfungwa. Pfungwa imwe neimwe ine dhiyabhorosi pachake. Dhiyabhorosi imwe neimwe inofananidzwa zvakaenzana nehutano uye simba kune pfungwa dzakasiyana. Dhiyabhorosi ndicho chido chakakonzera zvido zvose zvehupenyu zvakangoguma, uye chimiro chake chimiro chakakumbwa chakaitwa nemafungiro ose enyika uye enyama ehupenyu huno. Pangosvika dhiyabhorosi nemafungiro, pane hondo.
Hondo yacho haisi yezvigaro, kutinhira nemheni, moto nesarufa, semuviri nemweya. Hondo iri pakati pemafungiro uye chido. Pfungwa inopomera dhiyabhorosi uye dhiyabhorosi anopomera pfungwa. Pfungwa inorayira dhiyabhorosi kuenda, uye dhiyabhorosi anoramba. Pfungwa dzinopa chikonzero, dhiyabhorosi anopindura nekuratidza chido icho pfungwa dzainge dzatongerwa munguva yehupenyu hwepanyama. Chido chega chega uye chiito chakaitwa kana chakabvumirwa nemafungiro mukati mehupenyu chinongororwa uye chakashamiswa mupfungwa. Zvido zvinokonzera kutambudzika. Iyi kutambura igehena-moto uye sarufa uye kutambudzwa kwakave kwakanyengedzwa nemudzidzi wezvebhaibheri mune zvidzidzo zvake zvebhaibheri. Dhiyabhorosi ndiye tenzi-chido chehupenyu, akagadzirirwa mufananidzo. Mhando dzakawanda iyo machechi akasiyana akapa madhimoni avo ndeyekusiyana kwemadhimoni nemanzwiro, akapiwa mafomu mushure mokufa nevakawanda pfungwa dzevanhu.
Zvimwe zvitendero zvemuzuva redu hazvisi zvekufunga sezvakaitwa kare. Zvimwe zvezvitendero zvekare zvakabvumira pfungwa kuti ibude mugehena kuitira kuti inakidzwe nemubairo wayo nekuda kwezvakange zvaita munguva yehupenyu. Chimwe chechitendero chechitendero chechiKristu chinodzosera dhiyabhori waro uye chinoita kuti munhu abve mugehena, kana shamwari dzake dzichabhadhara mari yake yakanaka uye yezano kune chechi. Asi hapana nyaya inotorwa kumunhu chero upi zvake asina kuchenjera kuti apinde muchechi iyoyo asati afa. Anofanira kugara mugehena nguva dzose, uye dhiabhorosi anogona kuita naye sezvaanoda, saka vanotaura. Mamwe masangano anoderedza mari yavo kuburikidza nekuve vakasimba zvakanyanya mukusarudza kwavo. Ikoko hakuna bhizinesi-seimwe kana imwe nzira inobva muhero yavo. Kana iwe ukapinda mauri unofanira kugara mazviri. Ungave uchipinda kana kuchengeta kunze kunobva pakuti iwe hautendi kana kutenda mune chitendero chechimwe chekereke idzodzo.
Asi zvisinei nemachechi angataura, chokwadi ndechokuti mushure mokunge dhiabhorosi, chido chechimiro, akaratidza uye achipomera pfungwa yezvakaipa zvose zvaakaita munguva yehupenyu, uye mushure mokunge pfungwa dzakatambura kutambudzwa kunokonzerwa nekuchiva kwekutsva, ipapo dhiyabhorosi haakwanise kubata pfungwa, boka repfungwa uye pane kuguma kwegehena. Pfungwa inoenderera mberi kwayo kuti inakidzwe nguva yaro yekuzorora kana kurota kuburikidza nemafungiro ayo, kugadzirira kudzokera kwayo kunyika yepanyama kuti itange imwe nguva yekudzidzira mukirasi yayo muhupenyu. Dhiyabhorosi anoramba ari munharaunda yaanoda kwenguva yakati, asi mamiriro ezvinhu haasi iye gehena nekuda kwechido. Asina pfungwa, dhiyabhorosi haakwanisi kuramba achiita sechimiro uye saka zvishoma nezvishoma zvinogadziriswa muchishuvo chaicho chekuda kwaakaitwa. Ndiyo kuguma kwedhiyabhorosi chaiyo.
Gehena uye dhiabhorosi haafaniri kufunga nezvekutya nekudedera. Jahena uye dhiabhorosi zvinofanira kufungwa nemunhu wose anogona kufunga uye ane chido mune zvaakabva uye remangwana. Iye anotsvaga kune avo vari vachiri kutambura nekunetseka vakapiwa pfungwa dzavo nekudzidziswa kwekutanga. Tinogona kuva nechokwadi kana gehena uye dhiyabhorosi aripo isu hatigoni kuvatiza kuburikidza nekuedza kutiza uye kuramba tisingazivi. Kana mumwe achiziva nezvedhiabhorosi uye gehena kana asingatyi. Kusava nehanya navo kana tichida, asi vacharamba vachidaro kusvikira tavaziva uye tichivabvisa.
Asi nei pfungwa inofanira kufa hero, uye chinangwa chayo chii? Pfungwa dzinotambudzwa negehena nokuti hazvina kubudirira kutonga pamusoro payo, nokuti simba rayo harina kusimbiswa, rinogadziriswa uye rinogadzirisana kune mumwe nemumwe, nokuti pane izvo zviri mariri zvisingazivi, izvo zvinopesana nekurongeka uye kubatana, izvo zvinokwezva kunzwa. Pfungwa dzichazviisa pasi pegehena kusvikira ichisimuka uye ichigadzirisa zvayo, inotsiva kusaziva nezivo uye inogona kuzvikunda.
Chinangwa chenyika uye chido, dhiyabhorosi, ndechekudzidzira uye kudzidzisa pfungwa kuburikidza nekuchipa icho chinoitika kuburikidza nekunzwa, kuti inogona kusiyanisa pakati pezviito zvehuro hwayo uye nemigumisiro yekunzwa, uye kuburikidza nokukunda kukunda yakapiwa nechido simba repfungwa richigadziridzwa, uye naizvozvo pfungwa inosvika pakuziva nekuzvibata pachayo uye kubva pakuzvibata kwayo pachako, kusvika kune ruzivo rwega, uye rusununguko. Pasina ruzivo, hapana kunzwa; pasina kunzwa, kusatambudzwa; pasina kushungurudzika, kwete kushorwa uye pasina kushorwa pasina kuzvidzivirira; pasina ruzivo, kwete zivo; pasina ruzivo, hapana rusununguko.
Hero inopa mupfungwa nekuchiva, iyo ipo mapofu uye asingazivi mhuka simba uye inofarira kusangana kwepfungwa, nokuti kutaura kwayo kuburikidza nekunzwa kunogona kusimbiswa chete nemafungiro. Chido chinonakidzwa nemarwadzo zvakadai sekunakidzwa, nokuti inopa manzwiro, uye kunzwa kunofadza. Kushushikana hakufadzi pfungwa, pfungwa yakakwirira, kwete mutezo.
Gehena ndiyo hondo yepfungwa uye chido. Gehena uye chido hachisi chechimiro chepfungwa. Kana pfungwa dzaive dzechimiro chechido ipapo chido chaisazopa gehena kana kutambura mupfungwa. Pfungwa dzinoitika kugehena nokuti dzakasiyana uye hadzisi dzakafanana nemhando yeiyo hero inogadzirwa. Asi zvinotambudza nokuti zvakatora chikamu pane chiito chakaguma nehero. Kutambudzika kwepfungwa kunotora kuburikidza nenguva iyo inotora kuti izviparadzanise kubva kune izvo zvakasiyana nemutsa kubva kwavari. Mukuzvisunungura pachake kubva kuchido negehena mushure mekufa hazviwani rusununguko narini.
Chikonzero nei pfungwa inofanira kuonana uye kushanda nekuchiva, iyo yakasiyana uye kwete, ndeyokuti kune humwe humwe humwe hutano hwepfungwa dzinenge huri chido chechido. Uyu unhu uhwu hutsva hwomusiya hwepfungwa. Chimwe chinhu chakasviba chepfungwa ndechokuti mukati uye mupfungwa iyo chido chinokwezva pfungwa. Chikamu chemafu ndicho chiremera chisingaregi chepfungwa uye icho chinoita kuti kutambura kugoneke mupfungwa. Iko pfungwa inokwezva kuchiva nekuda kwesimba rima repfungwa. Upenyu hunofadza uye hwemweya mumitumbi yemuviri, uye chirevo chepasi rose chechido, zvine simba pamusoro pemafungiro. Apo pfungwa inokunda uye inodzora simba rayo rakaipa, chido hachina simba pamusoro pemafungiro, dhiyabhorosi achasungirirwa uye pfungwa haizotambudzizve hero, nokuti hapana chinhu mairi iyo moto wegehena inogona kupisa.
Rusununguko kubva kugehena, kana dhiyabhorosi, kana kutambura, rinogona kuwanikwa chete apo iri mumuviri wenyama. Gehena uye dhiabhorosi vanokundwa nepfungwa mushure mekufa, asi kwechinguva chete. Hondo yekupedzisira inofanira kusarudzwa asati afa. Kusvikira hondo yekupedzisira yakarwiwa uye yakakunda, pfungwa haigoni kuzviziva pachake sekuramba kuripo kwekusununguka. Pfungwa imwe neimwe ichava mune imwe hupenyu hunoita huri muhondo yayo yekusununguka. Zvinogona kunge zvisingazobudi muhupenyu ihwohwo, asi ruzivo rwakawana kuburikidza neruzivo rwayo kurwisana ruchawedzera kune simba raro uye ruchaita kuti ruve rwakakwana pakugadzirisa kwekupedzisira. Nekuedza nesimba ipapo pachava nekusingaperi hondo yekupedzisira uye ichakunda muhondo iyoyo.
Chido kana dhiyabhorosi haamboiti kukurwisana kwekupedzisira. Apo pfungwa dzakagadzirira inotanga. Pangopera pfungwa iyo ichidzivisa kutungamirirwa nechido uye inoramba kubvuma kune chero chekuchiva iyo iyo inonyatsoziva kuti haifaniri kubvuma, zvino inopinda mugehena. Jahena inzvimbo yekutambudzika kwepfungwa mukuedza kwayo kukurira kusanzwisisa kwayo, kuzviwana pfuma uye ruzivo. Sezvo pfungwa dzichimira pasi uye dzisingabvumi, dhiyabhorosi anowedzera kushanda uye anoshandisa chigove chake uye moto wegehena unopisa zvakanyanya. Asi kunze kwokunge kurwa kuri kukwana zvachose moto unotungidzwa zvakare nekudemba, kuzvidemba nekurwadziwa kwepfungwa nokuda kwaro kubereka uye kuoneka kwacho kukundikana. Sezvo inodzokorora hondo yacho kana inoramba ichimira, iyo yose pfungwa dzinobhadharwa kusvika pamucheto wezvinetso; asi havangaputsi. Izvo zvose mazano uye maitiro uye mafungiro anokonzerwa nemakore ezvido achaonekwa mumugariro wepfungwa "mumadzinza" ayo mugehena. Moto wegehena uchatowedzera mukukura sezvo pfungwa inoramba ichidzivisa kana kuti kusimuka kubva kwavari. Sezvo pfungwa dzoramba kuratidzira kana kupa nzira kune imwe neimwe yezvinangwa izvo zvinozvifungidzira, uye sezvo inoramba kukanganisa kugunzva kana kushuva kwepabonde, kupisa kunokura kunotyisa uye kunotyisa uye zvino moto unoita sokuti unopisa. Asi kutambura hakusi kuderedzwa, nokuti munzvimbo yaro kunouya kusakundikana uye manzwiro ekupiswa uye kusavapo kwechiedza, icho chinotyisa semoto unopisa. Nyika yose inova gehena. Kuseka kwakafanana nekodha isina chinhu kana kugomera. Vanhu vanogona kuonekwa sevanyengeri kana mapenzi anonyengedzwa avo vanodzingirira mithunzi yavo kana kuti vanoita mitambo isina zvazvinobatsira, uye hupenyu hwehupenyu hwako hunenge hwakaoma. Asi kunyange panguva yekurwadziwa kukuru mupfungwa ichaziva kuti inogona kumira mumiedzo yose, miedzo nematambudziko chero ipi zvayo kana ikada, uye kuti haikwanise kukundikana, kana isingabvumi, uye kuti ichakunda kana ichi kubata.
Dhiyabhorosi kurwiswa haisi mumuviri weumwe mukadzi kana murume. Dhiyabhorosi kuti arwe uye akunde ari mumuviri wake. Hapana mumwe munhu kana muviri kunze kweyako ndeyekupomerwa mhosva uyo akambopikisa dhiyabhorosi uye akapinda mugehena. Pfungwa yakadaro inonyengera yaDhiyabhorosi, uyo anoedza kukanda pfungwa kubva panzira uye kudzivirira hondo imwe kubva pakuona dhiyabhorosi chaiye. Kana munhu akanganisa mumwe kune zvaanotambura, iyeyo zvechokwadi haasi kurwisa hondo yechokwadi. Zvinoratidza kuti ari kuedza kutiza kana kuti kudzivirira kubva pamoto. Ari kutambura nekudada uye kuzvikudza, kana zvisinei kuti chiratidzo chake chakanyanyisa uye haagoni kuramba nehondo, saka anomhanya.
Pfungwa dzichaziva kuti kana ikabereka uye ichipa nzira yekunyengedzwa kwemazwi kana kuti chinangwa chechiremera, kuti haigoni muhupenyu huno hunova husingaperi uye hune rusununguko. Asi pfungwa iyo yakagadzirira inoziva kuti kana iyo isingabvumi kune pfungwa kana kune vavariro, kuti ichava muhupenyu ihwohwo hukunde dhiyabhorosi, kudzima gehena, kukunda rufu, kuve kusafa uye kuva norusununguko. Chero bedzi pfungwa inogona kutambura kugehena haina kukodzera kuva isingafi. Icho mupfungwa kana mupfungwa kana nemafungiro anokwanisa kutambura kubva kugehena-moto haagoni kuva asina kufa uye anofanira kupiswa kuti pfungwa dzisaziva zvisingafi. Hero inofanira kupfuurirwa uye moto wayo inofanira kupisa kusvikira zvose zvitsva zvinogona kupiswa. Basa rinogona kuitwa chete nemunhu nemwoyo wose, nekuziva uye nekuchenjera uye pasina kugadzirisa. Hapano kutyisidzira. Hero haingatengi munhu uye inorambwa nevarume vakawanda. Avo avo vakagadzirira iyo vachipinda mairi nekukunda.
Muna December nhamba, Hedheni ichava neZVENGA.